Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta magaalada Garoowe kulan kula qaatay danjiraha Qaramada Midoobey ee Soomaaliya Michael Keating. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa joogay Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Horumarinta reer Miyiga, Wasiirka Waxbarashada Iyo Tacliinta Sare, Wasiirka Caddaalada iyo Arrimaha Diinta iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada Dowladda...
Maydka Gabar Labaatan Jir ah oo Laga Helay Magaalada Qabri-Dahare ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya,Xiisadana Ka Dhalatey.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Qabri-Dahare ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in halkaa ay ka jirto xiisad ka dhalatay gabar 20 sano jir ah oo meydkeeda la helay. Taysiir Cumar Maxamed oo ah gabadha meydkeeda la helay ayaa la sheegay in markii hore ay qabteen ciidamada maamulka halkaa ka...
Hindise Sharcadeed Saameynaya Shirkadaha Shisheeye oo Barlamaanka Soomaaliya ka Shirayo.
Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta la horgeynaya sharciga Shirkadaha dalka, waxaana ka mid hindise sharciyeedyada ay xukuumadda u soo gudbisay Baarlamaanka. Sharciga Shirkaddaha ayaa ka mid ah sharciga ugu saameynta badan ee dalka, kaa soo haddii la dhaqan geliyo wax badan ka bedelaya hab dhaqanada shirkadaha ka howlgala dalka, kuwaasoo...
Shacabka Dalka Ciraaq oo Maanta La Filayo in ay Doorasho Guud U Dareeraan.
Shacabka ku dhaqan dalka Ciraaq ayaa guud ahaan maanta u dareeraya codbixin doorashada Baarlamaanigga ah, markii ugu horeysay tan iyo markii dowladda ay ka guuleysatay in dalku ay ka sarto Daacish. Haider Al-Abadi oo ah ra’iisal-wasaaraha haatan talada haya ee dalkaasi ayaa siweyn loo hadal hayaa in uu ku guuleysan...
Saldhiga Millateriga ee Turkigu Muqdisho ku Leeyahey oo Hoobiyeyaal Lagu Garaacey.
Madaafiic dhowr ah ayaa lagu waramayaa in subaxnimadii hore ee saakay Al-shabaab ku weerareen saldhiga Turkiga ee magaalada Muqdisho sida ay warbaahinta u sheegeen dadka degan xaafaddaha ku dhaw dhaw saldhiga. Ilaa iyo hadda lama oga haddii uu jiro khasaare ka dhashay madaafiicdan lagu tuuray saldhiga, waxaana sheegtay mas’uuliyada madaafiicdan...
Weerarkii Ka Dhacey Barriire oo Dawladda Mareykanku Sheegtey in ay Baaritaan ku Sameyneyso.
War ka soo baxay taliska militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay baarayaan wararka ku saabsan in dad shacab ah lagu dilay weerar ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya. Taliska AFRICOM ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay ka qeyb galeen howlgal ay ciidamada Soomaaliya hoggaaminayeen oo lagu kala dhantaalay shabakad Al-Shabaab...
Dilalka Magaalada Muqdisho ka Dhaca oo Wasaaradda Amnigu Si Adag uga Hadashey wasiirka Wasaarada islaw ayaa ka hadley.
Wasiirrada Amniga gudaha Soomaaliya ayaa si adag uga hadashay dilalka ka dhacay caasimada ee lagula kaco mas’uuliyiinta ka tirsan dowladda iyo dadka rayidka, xili dhinaca kale ay nagu soo fool leedahay bisha Barakeysan ee Ramadaan. Wasiirka Amniga gudaha Maxamed Abuukar Ducaale Isloow ayaa sheegay in magaalada Muqdisho xaq u laheyn...
Saraakiil ka tirsanaa Al-shabaab oo Dawlada Federalku Sheegtey in ay ku Dileen Deegaano Hoos taga G/sh/hoose.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in duqeyn maalin ka hor ka dhacday deegaan hoos taga degmada Bariirre ee gobolka Shabeelaha hoose ku dileen saraakiil ka tirsanaa Al-shabaab. Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jen Cabdullaahi Cali Caanood oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa shaaciyay magacyada saraakiisha lagu dilay weerarka oo ay wada...
Magaalada Muqdisho Gaar ahaan Degmada Wadajir oo Sarkaal ka tirsan Nabadsugidda Gurigiisa la Weerarey.
Sarkaal ka tirsan nabad-sugida Soomaaliya ayaa faahin dheeraad ah ka bixiyay weerar xalay lagu qaaday guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho kaa oo lagu dilay ilaa Afar ruux. Sarkaalka oo dalbaday in aan magaciisa loo adeegsaday warbaahinta oo la hadlay VOA ayaa sheegay rag ka tirsan sida uu hadalka...
Wasaaradda Dastuurka Dib u Eegista Shirweynaha ay Waddo oo Maamulka Jubaland Gabi ahaantiisba Qaadacey.
Shirkan oo looga hadli doono dib u eegista Dastuurka, 13 bishan Maaj-na ka furmi doona Muqdiso ayay wasaaradda cadaaladda, dastuurka iyo arimaha Diinta Jubbaland shaacisay in aysan ka qeyb-gali doonin shirkaasi. Wasiirka wasaaradda cadaaladda, dastuurka iyo arimaha diinta Jubbaland Dr. Aadam Ibraahim Aw-xirsi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in...